Ukufuduka okumanyeneyo ukuya kwiSoftware yasimahla-iGeofumadas
Ukuhambela Ukufudukela kwiSofthiwe yamahhala
NgoJuni, 2009 GvSIG
Ishicilelwe phantsi kwelayisenisi yeCreative Commons, ngesiNgesi nangesiNgesi, inkqubo yokwenziwa kweSebe loMphathiswa weZibonelelo kunye nezoThutho lwaseValencia ekufudukisweni kwayo kwisofthiwe yezorhwebo ukukhulula isofthiwe.
Le projekthi ibizwa ngokuba yi-gvPONTIS, kwaye ngaphezu kokubuyiselwa kwakhona kwamava, inomsebenzi omkhulu wokuphononongwa kwendlela kunye nezinga eliphezulu lokuhlelwa kokugqibela.
Ndingathanda ukuthetha kakhulu malunga nolu xwebhu, kodwa eyona nto ndiyincomayo kukuba uyikhuphele kwaye uyithumele ukuba iprintwe ngombala kuba isecingweni. Ilungele ilizwe laseSpanish elijonge ukulandela loo ndlela inye; Okubangela umdla kukuba okuninzi kwale projekthi kwafezekiswa ngesilivere enye eyayisetyenziswa ukubakhona phantsi kwelayisensi yorhwebo.
Kule nto kubalulekile kuthi, kubakho kule projekthi i-gvSIG yazalwa, isixhobo esahlukileyo kwabanye phantsi kwelayisenisi yamahhala, ukuba yinxalenye yeprojekthi yenkxaso ende engabandakanyi nje kuphela umxholo we-cartography kodwa "bonke" abanye iinkqubo zekhompyutha ezisetyenziswayo.
Ngoku i-gvSIG iye yaba ngamazwe ngamazwe kwaye abaninzi bethu baye bafaka ukuba iya kuba yi software ekhululekile yokusetyenziswa kwe-GIS eya kuba yinto eyaziwayo kakhulu eYurophu naseLatin America (ukuba abayithobeli zakhe izithembiso). Imephu ibonisa uLuntu lwaseValencian, esele idlule kwizigidi ezi-5 zabemi, koomasipala abangaphezulu kwama-540, malunga ne-10% yabemi baseSpain.
Olu catshulwa lihlukaniswe kwiindawo ezintathu, kwaye oku kuyilathisi:
I1 Icandelo: Uphuhliso lwezentlalo kunye newebhu
Isahluko 1 Amagqabantshintshi
Isahluko 2 gvADADES: amava ngeDatabase Management Systems
Isahluko 3 gvMÉTRICA kunye neMOSKitt: inkcazo yendlela yophuhliso nenkxaso yayo
Isahluko 4 gvHIDRA: ukuphuhlisa isikhokelo se-PHP
Isahluko 5 Ukuphunyezwa kweeNkqubo zoLawulo lweNguqulelo: iCVS kunye nokuGuqulwa
Isahluko 6 Ukuphumeza isiXhobo sokuXela
Isahluko 7 Ukufuduka kwezibuko lewebhu kunye neIntranet
Isahluko 8 Umsebenzi wokuqhubekeka nokujonga iifayile
Isahluko 9 gvADOC: inkqubo yolawulo lwamaxwebhu
I2 Icandelo: Iinkqubo zokuSebenza kunye noNxibelelwano
Isahluko se-10 soMsebenzisi weKhompyutha
Isahluko 11 IiNdawo zokuSebenzela iiNethiwekhi
Isahluko 12 Imeko yokunxibelelana nothungelwano
Isahluko 13 Iiseva eziManyanisiweyo
Icandelo le-3: i-SIG ne-CAD
Isahluko 14 gvSIG: intshayelelo
Isahluko se-15 gvSIG: inkcazo kunye nokulungiswa kwemeko yokuqala
Isahluko se-16 gvSIG: inguquko kwisisombululo sangoku
Isahluko 17 gvSIG: izigqibo
Isahluko 18 gvSIG: imigca elandelayo yokusebenza
Olu xwebhu aluqinisekanga ngengqondo yokuba lusele lugqityiwe, kunoko yingxelo ebonisa imeko yokuqala, indlela ekuqwalaselwe ngayo, izigqibo okanye iingcebiso kunye namanyathelo ekufuneka elandelwe. Kwimeko ye-gvSIG, ezinye zezinto ezipapashwe kwifayile ye- 4tas. iintsuku, kodwa zongezwa kwiicatshulwa ezigqityiweyo ezifana, umzekelo, imigaqo ye-initiative ye-INSPIRE, efuna ukubhekisela kumazwe aseYurophu.
Apha ungalanda umqulu.
Post edlulileyo«Ngaphambilini GIS software - echazwe 1000 amagama
Post Next Iimaphu xa ufuna iindizaOkulandelayo »